Nahita Zavatra Tsara Lavitra Noho ny Laza Aho | Tantaram-piainana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kambôdzianina Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kwangali Kwanyama Lingala Litoanianina Luganda Luo Luvale Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Myama Ndebele Ndonga Ngabere Norvezianina Nyaneka Nzema Ossète Ourdou Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tatar Tigrigna Tiorka Tiv Tok Pisin Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Umbundu Venda Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
Nahita Zavatra Tsara Lavitra Noho ny Laza Aho
Notantarain’i Mina Hung Godenzi
Ankizivavy tsotsotra kely aho nefa lasa nalaza tampoka, rehefa voafidy ho tovovavy tsara tarehy indrindra teto Hong-Kong, tamin’ny 1984. Hita teny amin’ny fonona gazetiboky sy gazety ny sariko. Nihira sy nandihy aho, nanao famelabelaran-kevitra, nanolotra fandaharana tao amin’ny tele, nanao akanjo tsara be foana, ary niaraka matetika tamin’ny olona ambony, ohatra hoe ny governoran’i Hong-Kong.
Lasa nilalao filma aho herintaona tatỳ aoriana, ary izaho matetika no tena nisongadina. Te hahafantatra ny tantarako ny mpanao gazety, ary te haka sary ahy ny mpaka sary. Nanasa ahy ny olona rehefa nisy filma vaovao nivoaka sy zavatra vaovao notokanana. Nisy nanasa hisakafo foana koa aho. Nalaza be aho tamin’izany.
Nanao filma nisy herisetra
Tsy tena nahafinaritra akory anefa ilay izy. Filma nisy herisetra no tena nataoko, ka nampidi-doza. Matetika no tsy solona olon-kafa hoatran’ny any Hollywood ny mpilalao filma eto Hong-Kong rehefa mampidi-doza ny anjarany. Izaho ihany àry no nanao an’ilay izy, ohatra hoe sady nitaingina môtô no nitsambikina teny ambony fiara. Nisy fitondran-tena ratsy koa ny ankamaroany, ary ny sasany aza nisy resaka demonia.
Nanambady mpamokatra filma aho tamin’ny 1995. Nananako daholo izay noheveriko hoe mahasambatra: Laza, harena, ary vady tsara fanahy. Kivikivy foana anefa aho sady tsy sambatra. Tsy nanao filma intsony àry aho.
NAHATSIARO NY FAHAZAZAKO
Nanomboka nieritreritra ny zavatra nataonay tamin’ny mbola kely aho. Nankany amin’ny fianakavian-dry Joe McGrath izaho sy ny zokiko vavy isaky ny asabotsy. Vavolombelon’i Jehovah ry zareo. Nampianariny Baiboly niaraka tamin’ny zanany telo vavy izahay. Nifankatia be ry zareo, sady tena nanaja ny vady aman-janany i “Dadatoa Joe.” Tiako koa ny niaraka tamin-dry zareo tany amin’ny fivavahany. Namonjy fivoriambe izahay indraindray. Nahafinaritra erỳ tamin’izany. Nilamin-tsaina be aho rehefa niaraka tamin’ny Vavolombelona.
Tsy mba hoatr’izany anefa ny tao an-tranonay fa nampalahelo be. Nankarary fo an’i Neny ny zavatra nataon’i Dada, dia lasa kivy be izy. Tsy nandeha tany amin’ny Vavolombelon’i Jehovah intsony i Neny, tamin’izaho folo taona teo ho eo. Izaho kosa mbola nandeha ihany, saingy nanara-driandrano fotsiny. Natao batisa aho tamin’izaho 17 taona. Nanao zavatra tsy mety anefa aho taorian’izay, ka lasa tsy anisan’ny fiangonana intsony.
TAPA-KEVITRA NY HIVERINA AMIN’I JEHOVAH
Tonga nitsidika ahy ny anti-panahy roa tao amin’ny fiangonan’ny Vavolombelon’i Jehovah, taoriana kelin’ny mariazinay. Nohazavain’izy ireo tamiko izay tokony hatao raha te hiverina amin’i Jehovah aho. Nasainy nanampy ahy ny misionera atao hoe Cindy. Efa tsy tena naharesy lahatra ahy intsony ny zavatra ninoako, ka nasaiko noporofoiny raha Tenin’Andriamanitra ny Baiboly. Noresahiny tamiko ny sasany amin’ireo faminaniana efa tanteraka. Lasa mpinamana be izahay, ka nanontaniany aho raha te hianatra Baiboly. Nanaiky aho, ary tamin’izay vao tena hitako hoe be fitiavana i Jehovah sady tiany ho sambatra aho.
Nanomboka nivory niaraka tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah indray aho. Aleoko lavitra niaraka tamin’izy ireo, toy izay niaraka tamin’ireo olona niara-niasa tamiko taloha. Lasa tsy natoky olona intsony aho sady halako ny tenako, vokatry ny zavatra nanjo ahy tamin’ny mbola kely. Nisy olona nanampy ahy hiova tao amin’ny fiangonanay, ka nasehony ahy avy tao amin’ny Baiboly izay azoko natao. Lasa nahay nifidy namana koa aho.
ZAVATRA TSARA LAVITRA NOHO NY LAZA
Nifindra tany Hollywood, any Etazonia, izahay mivady tamin’ny 1997. Vao mainka aho nazoto nanampy olona handray soa avy amin’ny Baiboly. Izany no tena nahasambatra ahy noho ny hoe nalaza tamin’ny filma. Nihaona tamin’i Cheri, namako tany Hong-Kong, aho tamin’ny 2002. Nifindra tany Hollywood koa mantsy izy. Nisy itovizana be ny fiainanay, satria voafidy ho tovovavy tsara tarehy indrindra teto Hong-Kong izy, herintaona talohako. Izy no nametraka an’ilay satroboninahitra teo amin’ny lohako. Lasa mpilalao filma koa izy, ary mpamokatra filma tatỳ aoriana. Niara-niasa tamin’olona malaza anisan’ny mpandrindra ny fanaovana filma izy tamin’izany.
Nalahelo be an’i Cheri aho rehefa naheno hoe maty tampoka ny fofombadiny satria voan’ny aretim-po. Bodista i Cheri, saingy tsy nampionona azy ny fivavahany. Lasa nalaza hoatr’ahy izy, ary betsaka no naniry an’izany. Tsy sambatra anefa izy sady tsy natoky olona. Noresahiko taminy àry izay nianarako tao amin’ny Baiboly, nefa sarotra be taminy ny nanaiky an’ilay izy noho izy Bodista.
Tamin’i Cheri nanao filma
Niantso ahy i Cheri indray andro, tamin’ny 2003. Nanao filma tany Vancouver any Kanada izy tamin’izay. Faly erỳ izy nitantara hoe nitondra fiara izy indray andro, ary nandeha nijery ny zavaboary. Tampoka teo anefa, hono, dia niteny mafy be izy hoe: “Iza marina àry ianao Andriamanitra ô? Iza no anaranao?” Tamin’izay indrindra izy no nandalo teo amin’ny Efitrano Fanjakana, dia nahita an’ilay hoe Jehovah. Nieritreritra izy hoe valim-bavaka ilay izy. Te hahita Vavolombelon’i Jehovah mafy izy. Niezaka nanampy azy àry aho, ka nanatrika fivoriana tany amin’ny fiangonana miteny sinoa izy, andro vitsivitsy taorian’izay.
Nilaza i Cheri tatỳ aoriana hoe: “Tsara fanahy be ry zareo! Azoko lazaina an-dry zareo daholo izay ato am-poko.” Faly be aho naheno an’izany. Tsy mba nana-namana mantsy i Cheri tamin’izy nanao filma. Nanatrika fivoriana foana izy. Nanaiky hanao filma roa tany Chine anefa izy tamin’ny 2005, ka voatery niverina tany Hong-Kong. Nanokan-tena ho an’i Jehovah izy tamin’ny 2006, ary natao batisa tany amin’ny fivoriamben’ny Vavolombelon’i Jehovah tany Hong-Kong. Te hanompo an’i Jehovah bebe kokoa izy, saingy sarotra be taminy izany noho ny asany. Tsy nahatsiaro ho sambatra mihitsy izy.
FALY MANAMPY OLONA
Niova tanteraka ny fiainan’i Cheri, tamin’ny 2009. Tsy nanao filma intsony izy, ka afaka manompo an’i Jehovah bebe kokoa. Nahazo namana be dia be tao amin’ny fiangonana izy. Lasa mpitory ny vaovao tsaran’ilay Fanjakana manontolo andro koa izy, ary tena faly manampy ny olona hanana fiainana tsara kokoa.—Matio 24:14.
Nianatra teny népali koa i Cheri, satria te hanampy antoko-mpitory miteny népali. Tsy dia mahay miteny anglisy na sinoa mantsy ny Népalais any Hong-Kong sady hafa ny kolontsainy, ka tsy dia misy miraharaha izy ireo sady ambanina mihitsy aza. Nilaza i Cheri hoe tiany be mihitsy ny nanampy azy ireny hianatra Baiboly. Nitory isan-trano, ohatra, izy indray mandeha, dia nahita vehivavy népalais. Kely fotsiny ny zavatra fantatr’ilay vehivavy momba an’i Jesosy, ary tsy nahalala an’i Jehovah mihitsy izy. Nampiasa Baiboly i Cheri mba hanazavana taminy hoe nivavaka tamin’ny Rainy tany an-danitra i Jesosy. Azon’ilay vehivavy avy eo fa afaka mivavaka amin’ilay tena Andriamanitra izy, ary i Jehovah no anaran’izy io. Nanaiky ny vaovao tsara àry izy. Nianatra Baiboly koa ny vadiny sy ny zanany vavy taoriana kelin’izay.—Salamo 83:18; Lioka 22:41, 42.
Tsapako hoe faly be mihitsy i Cheri nitory manontolo andro. Nieritreritra àry aho hoe: ‘Tsy hitako izay manakana ahy tsy hanao hoatr’izany koa!’ Efa tany Hong-Kong indray aho tamin’izay. Nalamiko tsara àry ny fiainako, amin’izay aho manam-potoana kokoa hampianarana Baiboly. Tsapako hoe sambatra aho rehefa manampy olona hianatra Baiboly sy mihaino azy ireo.
Tsapako hoe sambatra aho rehefa manampy olona hianatra Baiboly
Nampianatra vehivavy iray avy any Vietnam, ohatra, aho. Kivikivy foana izy ary matetika no nitomany. Tena mahafinaritra azy anefa izao ny fiainany, ary tiany be ny miaraka amin’ny fiangonana.
Samy nahita zavatra tsara lavitra noho ny laza, na izaho na i Cheri. Tsara ilay nanao filma sady nahatonga anay halaza. Mahafinaritra kokoa anefa ny mampianatra ny olona momba an’i Jehovah Andriamanitra, satria manome voninahitra azy izany. Hitanay hoe tena marina ity tenin’i Jesosy ity: “Mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray.”—Asan’ny Apostoly 20:35.
Hizara Hizara Nahita Zavatra Tsara Lavitra Noho ny Laza Aho